Wasiir kashifay Wadahallo Qarsoodi ah oo Kenya kula jirto Soomaaliya
Wasiirka Arrimaha Dibada dalka Kenya Monica Juma
NAIROBI, Kenya - Wasiirka arrimaha Dibada ee Kenya Haweeneyda lagu magacaabo Monica Juma, ayaa waxay daboolka ka qaaday inuu hada soconayo wadahalo qarsoodi ah oo u dhaxeeya Soomaaliya iyo dalkeeda oo ku saabsan muranka dhanka Badda.
Soomaaliya ayaa ku doodeysa in Kenya ay kusoo xad-gubtay sohdinteeda dhanka Badda, islamarkaana waxay dacwad ka geysay Maxkamada Cadaalada Aduunak ee ICJ, taasoo wajigii koowaad ee Dacwad ay soo dhamaatay, xili loo fadhiyo go’aanka maxkamada.
Laakiin, kahor inta uusan soo bixin go’aanka Maxkamada ayaa waxaa wasiirka arrimaha dibada ee Kenya waxay ka dhawaajisay hadal shaki badan ku abuuraya Bulshadda Soomaaliyeed, kaasoo ah inay dooneyso inay ku xaliso arrintaan si Isfahan.
Iyadoo wareysi siinaysay wargeyska New Africa islamarkaana xaalada guud ee gobolka Geeska Afrika wax laga weydiinayay ayaa waxay kaloo ka ha hashay wasiiradda ujeedka ay ciidamadooda ujoogaan Soomaaliya.
“Dad badan ayaa nagu dhaleecayna joogitaanka ciidankeena ee Soomaaliya, laakiin waxaan aragnaa in halkaas ay ku jirto danaheena, maxaa yeelay in gobolka uu noqdo mid Barwaaqo iyo amaan ah, waa inay xoojino joogitaankeena Soomaaliya,” ayey tiri.
Iyadoo ka hadlaysay muran Badda ee Soomaaliya iyo Kenya ayay hadalkeeda kusii dartay: “Waxaan mar walba doorbidi lahayn inaan udirno Muqdisho fariin ah inay haboon tahay in murankeena aan inaga xalinno oo uusan soo gelin gacan saddexaad.
“Waxaan leenahay Urur goboleedka IGAD halkaasoo aan ku xalin karno murankeena. Waxaa jira heshiis is fahan oo aan xukuumada Muqdisho kula jirno, taasoo xoojinaya xiriirka Diblumaasiyadeed ee labada dal iyo macnaha wadaxaajoodka," ayay hadalkeeda raacisay.
“Dabcan wadank wuxuu haystaa ikhtiyaarro kala duwan oo ay kamid tahay inuu tago maxkamad, laakiin Soomaaliya waxaan la leenahay xiriir aan kala go’lahayn. Walina waxaan sahmineynaa dhamaan wadooyin kale," ayay tiri Wasiiradda.
“Waxaan noo socda wadahalo aan rajeynayo inaan kuwada gaarno heshiis wada ogol ah,” ayey hadalkeeda kusoo qatintay Wasiirka arrimaha Dibada ee dowladda Kenya Monica Juma.
Xiriirka labada dalka ayaa gaarey hadda meeshii ugu hooseysay iyadoo Villa Somalia...
Maxaa looga hadlay Kulankii Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta [Sawirro]
War Saxaafaded 30.05.2018. 21:32
Kenya oo eedeyn culus u jeedisay dowladda Federaalka Soomaaliya
Soomaliya 31.03.2018. 16:41
UN-ka oo beeniyey sheegasho ka timid Kenya oo ku saabsan kiiska badda
Afrika 13.11.2019. 15:00
Xog muhiim ah oo ku saabsan Kiiska muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya
Soomaliya 23.05.2018. 11:17